Xukuumadda Somaliland oo diiday mashruuc beeraleeyda loogu talagalay – Bandhiga
Xukuumadda Somaliland oo diiday mashruuc beeraleeyda loogu talagalay
Warbixin uu soo saaray gollaha ammaanka ee jimciyadda quruumaha ka dhaxeeysa ayaa lagu shaaciyay in mashruuc ay hay’adda FAO ugu talagashay beeraleeyda reer Somaliland.
Waxaa warbixinta lagu sheegay in la xanibay ka dib kolkii Xukuumada Muuse Biixi damacday in ay weecsato.
Mashruuca oo ahaa 10 kun oo tan oo siir iyo bacarimiye waxa ay Heyada FAO ugu talo gashay beeraleyda dalka, waxaana QM u soo xushay ganacsato qeybisa deeqda, balse Xukuumada Muuse Biixi ayaa isku deyday in ay weecisato mashruuca si ay ugu tagri fasho.
Somaliland ayaa isku deyday tiroba laba jeer horraantii sanadkii tegay ee 2018-kii in ay ganacasade ay madaxweynaha isku heyb yihiin loo xiro qeybinta mashruuca ay FAO ugu deeqdo beeraleyda Somaliland, sida ay caddeeysay warbixinta gollaha ammaanka ee Qaramada Madoobe.
Hay’adda Qaramada Madoobe ee FAO ayaa ka dib isku dayo dhowr ah oo ay ku dooneysay in si cadaalad ah loo qeybiyo mashruuca ku guuldareysatay, ka dibna yiqiinsatay in aaney suurtogal ahey in mashruuca la hirgeliyo bishii loo cayimay ee May 2018.
Mashruucan ay waday heyada QM ee FAO ayaa ah ka qura ee la shaaciyay in Xukuumada Muuse Biixi damacday in ay musuqmaasuqdo, waxaase tuhunku mudo badan ahaa in xukuumadu si joogto ah u weecsato mashaariicda una xirto ganacsato iyo shaqsiyaad madaxweynaha isku heyb yihiin.
Kol hadii Qaramada Midoobey ay u xanibtay mashruuc baxaad lahaa oo ay ka faaiideysan lahayaayeen beeraleyda dalka, waxa loo qaateen noqoneysa cabashooyinkii muwaadiniinta dalka ee cadaalad darada.
Cadaalad daradu kuma koobna uun saami qeybsiga darada dalka ka jirta ee waxa Iyana mudaba jirtay cadaalad daro lagu weecsado mashaariicda iyo deeqaha dalka loogu yabooho ee sida beeleysan loo weecsado.